Fanaovana fampanantenana poakaty : mampitandrina ny filoha, nefa… | NewsMada
Fanaovana fampanantenana poakaty : mampitandrina ny filoha, nefa…
“Jereo ny tantaran’ny firenentsika: ny asa ihany no andrefesana ny zavatra vitan’ny olona, fa tsy izay tenenin’ny olona. Ary io no efa nampitandremako foana hoe: tandremo fa betsaka ny olona manao fampanantenana poakaty.”
Tenin’ny filoha Rajaonarimampianina tany Addis-Abeba, Etopia, afakomaly, io, momba ny fanehoan-kevitra etsy sy eroa. Nefa mahay mitsara ny vahoaka malagasy, samy afa-kifampitsara hoe: inona no nataon’ny olona tsirairay avy tamin’izy nitantana? Izay koa no mety handrefesana ny zavatra mety ho vitan’ny olona.
“Efa nametraka ny vina efa nambarako tamin’ny vahoaka malagasy aho, ary mbola hotohizako ny fampahafantarana an’iny”, hoy izy momba ny vina Fisandratan’i Madagasikara 2030. Efa nipetraka taorian’ny asa natao tao anatin’izay efa-taona izay izany, efa nisy traikefa tao, efa nisy asa natao, efa nisy lalana naleha. Izay vao tena mamaritra hoe io no fanamafisana izany, fa tsy afa-kanaotao fotsiny.
Tsy atao izay lazaina, tsy lazaina izay atao…
Tena araka izay lazaina izay ve ny zava-misy sy ny atao? Ny fitondrana aza no tena mpanao fampanantenana poakaty. Nanomboka tamin’ny fanafoanana ny delestazy ao anatin’ny telo volana izay, ny hanaovana an’i Madagasikara ho sompitry ny faritry ny ranomasina Indianina…
Raha jerena ny tantara, saika hosoka sy hala-bato hatrany no ahazoan’ny mpitondra fandresena amin’ny fifidianana. Tsy takona afenina izany tamin’ny fifidianana kaominaly sy ny fifidianana senatorialy, taona 2015. Vitavita sy tsy hitahita ho azy ny tsy fanarahan-dalàna. Izay no ananana traikefa, lalana naleha, asa vita… anaovana vina hatramin’ny 2030; eny, na efa mahatofoka vahoaka… mahay mitsara izao aza? Na efa ampy andrefesana ny fahapotehan’ny firenena sy ny fiainam-bahoaka izay efa-taona izay…